प्रधानमन्त्रीलाई नयाँ वर्षको शुभकामना – eratokhabar
ई-रातो खबर २०७६, ४ बैशाख बुधबार २०:१५ April 17, 2019 144 Views
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वलीज्यू
नयाँ वर्षको शुभकामना छ !
जब तपाईंले लाखौँ युवाहरू, आमसर्वसाधारणले देखेभोगेका कटु सत्यहरू र असन्तुष्टिका आवाजलाई नमिलेका प्रश्न वा ‘राजनीतिको आवरणमा हिंसा’ भनेर फेरि पनि आफ्नो अहङ्कारलाई ‘क्यारी ओभर’ गर्नुभयो २०७६ सालको सुरुआतमा, म अरू अपेक्षा राख्दिनँ तर तपाईंकै भाषामा केही प्रश्न गर्न चाहन्छु । भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान बन्यो २०७५ साल भन्नुभो (यसमा हामी हाँस्नुपर्ने हो वा प्रश्न गलत भो ? व्यापारघाटा १५ खर्ब, नेपालीको ऋण सात हजार थपिनु, महालेखाले आर्थिक अनुशासन ध्वस्त भो भन्नु, सर्वोच्चले एनसेललाई दोषी देखाउनु, मेलम्चीको गति तपाईंकै पालामा अवरुद्ध हुनु, सेना बहसमा तानिनु र नेपालमा धार्मिक अतिक्रमणको बीजरोपणमा सरकार संलग्न हुनुले तपाईंकै प्रशंसकले पनि के ठान्ने ? तपाईंले देखाएका प्रगतिको सूचीभित्र आमजनताको बिहानबेलुकी कहाँ जोडिएको छ ? कानुन बनाएको वर्षका रूपमा उत्सव मनाएर भोक मर्दैन, बेरोजगारी टर्दैन । तपाईंको सम्बोधन सुन्ने मान्छे हरेक दिन देश छोडिरहेका छन् । आधा घन्टामा दर्जनौँ कानुन पारित गरिएका छन् र तिनीहरूमा भएका त्रुटि सच्याउन अब अर्को वर्ष पनि लाग्ला सायद ।
म प्रश्न परिवर्तन गर्छु, तपाईंको प्रशासनले हिरासतमा लिएका सयौँ युवा तथा राजनीतिक अभियन्ताहरू को हुन् ? आफूलाई पायक पर्ने प्रश्न सोध्न सिकाउनुभएको छ । तरिका ठिकै हो तर यथार्थ के हो भने तपाईंहरूलाई जागिर खाना पठाउने जनता सबैखाले प्रश्न सोध्न स्वतन्त्र छन् । जबाफ छैन भने त्यो तपाईंको बाध्यता हो र इमानदारी होइन । प्रश्न अहिले जनताले सोधेका छैनन् । तपाईंवरिपरिका घटना स्वयम् प्रश्न बनेका छन । बालुवाटारको जग्गा, वाइडबडीबारेको मौनता, सुनकाण्ड, स्थानीय सरकार र केन्द्रको भ्रष्टाचार, जनआवाज र विमतिसँगको ‘फोबिया’ जस्तो देखिने सरकारी रबैया, गाउँमा अकारण गरिएका गस्ती र झूट्टा मुद्दा, तपाईंका माननीय सभासद्को हिस्साको अर्बौं बजेट, पानीपँधेरो बनेको अमेरिकामोह, इन्डोप्यासिफिक रणनीति र नेपालको पोजिसन, बेलगाम दाता वा गैरसरकारी पैसाको व्यवसाय, करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्समा लज्जाजनक अवस्था आदि तथ्यबारे जबाफ दिनुभएन । प्रश्न गर्न सिकाउनुहुन्छ ? प्रश्न तपाईंको वरिपरि आफैँ नाचिरहेका छन् ।
लगानी सम्मेलन सफल भो कि असफल ? एउटा एनेक्डट प्रयोग गर्नुभएछ ‘नेपाल विश्वको उदाउँदो अर्थतन्त्र’ भनेर । सरकारको प्रशंसा भो रे ! नेपाली बैङ्कको पैसा विदेशी परियोजनालाई सुनिश्चित गर्नु लगानी सम्मेलनको सफलता हो ? सतलजले अरुण बनाउने हो कि नेपालीले बनाएर सतलज (भारत) लाई सुम्पने हो ? समाजको चरित्र र चाहना शान्ति र समृद्धि भन्नुभयो, प्रश्न सरकारको चरित्रको हो । युवा र खोलाबाहेक बेच्ने के छ ? रेमिट्यान्स कृषि र पर्यटनबाहेक धान्ने के छ ? यी कुनै पनि क्षेत्रमा समेत ध्यान छैन किनकि तपाईंहरू हरेक साताको हाटबजार जाँदा फरक लुगा लगाएजस्तो मौसमी कुरा गर्नुहुन्छ ।
आमजनताका प्रश्न पुरानै छन् । दलाल अर्थव्यवस्था आफैँ सकिन्छ ? नेपालमा रोजगारी खै ? नीतिगत भ्रष्टाचारको धमिराबाट देश कहिले मुक्त हुन्छ ? नेताकेन्द्रित शासनको सट्टा जनताकेन्द्रित शासन कहिले आउँछ ? मिचिएका सीमा फिर्ताका लागि के पहल र नतिजा आयो ? स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता आधारभूत कुरा राज्यले जिम्मा कहिले लिन्छ ? स्वास्थ्य बिमा कहाँ पुग्यो ? युवालाई बिनाधितो ऋण कहाँ छ ? नयाँनयाँ शिलान्यास र घोषणाले फुर्सद छैन । चाइनाबाट चुचो भएको रेल सिमानामा छ कि नुवाकोटतिर आइपुग्यो ? तपाईं प्रश्न सोध्ने तरिका होइन, उत्तरको तयारी गर्न सिक्नुपर्छजस्तो लाग्छ । तपाईंको शुभकामना मन्तव्य कुनै एनजीओको आवधिक समीक्षा होइन, शासन हातमा भएका कार्यकारीले आफूले बोलेको वाचाको नतिजामूलक र तथ्यपरक जबाफ दिनु हो ।
एक वर्षमा चमत्कार किन भएन भनेर कसैले सोधेकै छैनन् । कटु यथार्थ के हो भने तपाईंका सल्लाहकारहरू र मन्त्रिपरिषदमा डराएका मान्छे छन्, जागिर खाने र जागिर जोगाउनेभन्दा माथि सोच्ने कसैलाई फुर्सद र हिम्मत छैन । तपाईंको असल सल्लाहकारले तपाईंलाई यो पनि सिकाउँदो हो– गल्ती र कमजोरी धेरै गरिएको छ । व्यावहारिक र नीतिगत सीप पुगेन । राजनीतिक व्यवहार गर्न जानिएन । स्टेट र पार्टीलाई कर्पोरेट इन्फेक्सन भो, सुधार्न चाहन्छौँ भन्नु थियो । तपाईंलाई यो बुढेसकालमा गलत देखिन नपरोस् भन्ने छ, तपाईंलाई सही थापेर आफू बनियाँ बन्नेको घेरामा परेको प्रस्टै हुन्छ । खैर, तपाईंको काम तपाईंको जिम्मा । तर ठूलो तुक र अर्थको नभए पनि, धेरै बेतुकका कुरा आउन छोडून् । यसले नयाँ वर्ष अलि राजनीतिक र वैचारिक बहसको मार्गमा जानेछ । आज नेपालले बहाना होइन, नतिजा खोजेको छ र ती नतिजा यो ‘डिजाइन डिफेक्ट’ भएको मेसिनले निकाल्दैन । यो व्यक्तिगत कुराभन्दा धेरै माथिको प्रश्न हो । तपाईं असफल भए एउटा तपाईंको चित्त दुख्ला तर तपाईंले बिगारेको र थोपरेको सारा कुरा पूरै नेपालले भोग्नुपर्छ । नयाँ वर्षमा नयाँ युग आउँदैछ, तरिका नफेरी तथ्य फेरिन्न ।
यो दलालको घेराबन्दीभित्रको सत्ताबारे बुझेपछि, आफू प्रधानमन्त्री नभएको भए तपाईं पनि लड्न तयार हुनुहुन्छजस्तो लाग्छ ।